फ्रेम प्रयोग गरि पृष्ठमा पाठ केन्द्रित गर्न
पाठ चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ पृष्ठलाई केन्द्रित गर्न चाहनुहुन्छ.
घुसाउनुहोस् - फ्रेम रोज्नुहोस् ।
एङ्कर क्षेत्रमा पृष्ठमाचयन गर्नुहोस्।
आकार क्षेत्रमा, खापाको आयामहरू सेट गर्नुहोस्।
स्थिति क्षेत्रमा,तेर्सो र ठाडो बाकसहरूमा "केन्द्र"चयन गर्नुहोस्।
फ्रेमलाई रिसाइज गर्न, फ्रेनको कुना तान्नुहोस्.
Title is: फ्रेम प्रयोग गरि पृष्ठमा पाठ केन्द्रित गर्न